ko htike's prosaic collection: နအဖမှ ပြည်ပရောက် မြန်မာနိုင်ငံသားများ၏ မဲစာရင်း ကောက်ခံခြင်း
လိမ်ရင်လဲ ယုံလောက်အောင်လိမ် ဘို.ကောင်းပါတယ်.. နအဖ ရဲ့ ၂၀၀၈ ဖွဲ.စည်းပုံဥပဒေကို လွှတ်တော်ထဲမှာ တဖြေးဖြေး ပြင်ယူမယ်ဆိုတာ ”စိတ်ကူးယဉ် အိပ်မက် သက်သက်” သာ ဖြစ်ကြောင်း ဥပဒေ ပညာရှင်များ၏ သုံးသပ်တွေ.ရှိချက် ကို ဘီဘီစီက သုံးသပ်တင်ပြထားပါတယ် ။
ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်တစ်ဦးထဲ သဘောအရ သူ မပြင်လိုလျှင် ဘယ်သူမှပြင်မရတဲ့ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံ ဥပဒေကြီးအရ ဦးစီးချုပ်က(မင်းတို.ကြိုက်တာလုပ် .. ငါကတော့ မင်းတို.ကို မယုံဘူး ပြင်မပေးနိုင်ဘူး ) ဆိုရင်လဲ အဲဒါတရားဝင် ဆုံးဖြတ်ချက် ဖြစ်သွားပြီဗျ ပြင်မရဘူး...၅၅ သန်း သော မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံး က လက်ပိုက်ကြည့် နေရမယ့် အဆံုးအဖြတ် ဥပဒေပဲ။ ဒါဆိုရင် ကနေ. အခြေအနေနဲ့ ဘာထူးသေးတုံး ။
ထူးတာ တစ်ခုတော့ ရှိပါတယ် ယနေ့အခြေအနေမှာ ဦးစီးချုပ်၏ ဆုံးဖြတ်ချက်သည် အခြေခံဥပဒေနဲ့ ဘောင်မ၀င်တဲ့ စစ်အစိုးရရဲ့ အာဏာ သက်သက်။
၂၀၁၀ အပြီး တက်လာမယ့်အစိုးရလက်ထဲ စစ်ဦးစီးချုပ်ရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်များကတော့ ”တရားဝင်” ဘောင်ထဲက ဆုံးဖြတ်ချက် ဖြစ်သွားတော့မယ်။ ဘယ်သူကမှ တရားမ၀င်ဘူး လို.ပြောလို.မရတော့ဘူး ချည်ပြီးတုတ်ပြီးဘဲ ။
ဒီလိုပြင်ရခက်အောင် လုပ်ထားတာ အချို. နိုင်ငံတွေမှာ ရှိပေမယ့် ထိုနိုင်ငံတွေမှာ က လူ.အခွင့်အရေး အပြည့်အ၀ပေးထားမှု ကို ကာကွယ်ဘို.အတွက် ပြင်ရခက်အောင် လုပ်ထားတာ တွေ့ရပြီး ။
မြန်မာပြည်မှာကတော့ ပြောင်းပြန်ပါ အာဏာ ချုပ်ကိုင်ထားသူ တပ်မတော်ဦးစီးချုပ်ရဲ့ အာဏာကို အကာအကွယ်ပေးဘို. အတွက် ပြင်ရခက်အောင်လုပ်ထားတာ ဖြစ်ပြီး မြန်မာ တိုင်းရင်းသား ပြည်သူတွေရဲ့ ဘ၀ တိုးတက်မြင့်မား လူပီသမှုအတွက် အခိုင်အမါအာမခံပေး ကာကွယ်ပေးထားတာ မျိုး မဟုတ်ဘူး ။
ဒီလို ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် (လူတစ်ဦးတစ်ယောက်ရဲ့ သဘောထား ထင်မြင် ယူဆချက်အပေါ် တည်မှီနေတဲ့) ၂၀၀၈ အခြေခံဥပဒေကြီးကို ...အခြေခံပြီးတော့ ”ဒီမိုကရေစီ” နံမည်ဖျက်ထားတာဟာ ဥပဒေအမြင်မှာတော့ ကင်ဂျုံအီးလ် လို အာဏာရူးကို UN Secretary General ရာထူး ပေးထါးရသလိုပါဘဲ။
တပ်က မြန်မာပြည်ကို သူပိုင်ပစ္စည်းလို သဘောထားနဲ့ (ဘယ်ကောင်မှ မယုံဘူးကွာ) ဆိုရင်လဲ ဘာမှ မတတ်နိုင်အောင် ဖန်တီးရေးဆွဲ ထားတဲ့ ဖွဲ.စည်းပုံကြီးပါ။
ဒါကြောင့် ၂၀၀၈ ဖွဲ.စည်းပုံဥပဒေကို လွှတ်တော်ထဲကျမှ တဖြေးဖြေးပြင်ယူမယ် ဆိုတာ ”စိတ်ကူးယဉ်အိပ်မက် သက်သက်”(နအဖ က မဖြစ်နိုင်တဲ့ အနံ. ပေးထားသော False Hope)သာဖြစ် ပါတယ်။ ဥပဒေပညာရှင်များ ရဲ့ ရှင်းလင်းချက်ကို နားထောင်ကြည့်ပါ ......
16 June 2010 at 07:00
I work at Amnesty International and I'd like to get in touch. Could you email me at online.communities@amnesty.org?
2 July 2010 at 01:55
9 July 2010 at 02:38
23 July 2010 at 07:24
The so-called virtuous person isafowl stealer..... u....
သူများမျက်ချေးပဲ လက်ညှိးထိုးမနေနဲ့။ အိပ်မက်လှလှလေးတွေ မက်အောင် ပေါက်ကရ မျှော်လင့်ချက်တွေ မပေးနဲ့။ မိမိဘလော့ နာမည်ရဖို့ပဲ အတ္တစိတ်နဲ့ မိမိအောင်မြင်ရေးပဲ တဖက်သတ်ကြီး အလေးမထားပါနဲ့။ အခုအချိန်မှာ နအဖကို ဆန့်ကျင်တဲ့ တော်လှန်ရေး လုံးဝ ပျက်လုနီးနီးဖြစ်နေပြီ။ သူများတွေကို သြ၀ါဒပေးတဲ့ ဘလော့သမားပဲလုပ်မနေပါနဲ့။ အားလုံးရဲ့ စံနမူနာအဖြစ် နအဖရဲ့မတရားမှုတွေနဲ့ အရှက်မရှိပြောဆိုချက်တွေကို ပိတောက်မြေနဲ့ ကျေးစေတမန်မှာ သွားပြီး… ဆန့်ကျင်ရေးသားပေးပါ။ စစ်ဗိုလ်တွေနဲ့ စကားယှဉ်ထိုးပေးပါ။ နှလုံးရည်ချင်းလာယှဉ်ရဲရင်လာခဲ့ပါ။ ဒီမိုအမျိုးသမီးတွေ ဘလော့မှာ လူတွင်ကျယ်လုပ်နေတဲ့ နအဖ စစ်ဗိုလ်တွေကို သွားရောက် နှိပ်ကွပ်ပေးပါ။ အခုလိုပဲ ချောင်ထဲမှာ ပုန်းနေရင် ပြည်ပြေးဘ၀ကတက်လာမှာ မဟုတ်ဘူး။ လက်တွေကျကျ မလုပ်လျှင် မသူတော်တွေ ပြုတ်ကြစရာလမ်းမမြင်ဘူး။ ကျုပ်ရဲ့ မေတ္တာရပ်ခံချက်ဟာ ဘာမှ အပန်းကြီးတဲ့ ကိစ္စမဟုတ်သလို အန္တာရယ်များတဲ့ ကိစ္စလည်း မဟုတ်ပါဘူး။
10 November 2010 at 01:51